su'aalo wareysi Job | Career khayraadka ka USAHello | USAHello
Marka aad codsatid shaqo, aad weydiin doonaa su'aalo wareysi dhowr shaqo. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad ku saabsan xirfadaha iyo waayo-aragnimo. wareysi kasta waa ka duwan yahay, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah su'aalo loo shaqeeyayaasha badan weydii. Practice jawaabay su'aalaha wareysiga shaqada ugu badan. Practice kaa caawin doona inaad si fiican u samayn!
halkan waxaa ku qoran 5 su'aalo loo shaqeeyayaasha badan ku weydiin doonaa inaad:
Isku kay sheeg
Tani waa su'aasha ugu horeysa ee aad is weydiin doonaa wareysiga kasta. Si kooban u sharax shaqooyinkii aad lahayd iyo la hadasho oo ku saabsan waxa xirfadaha aad ugu fiican yihiin. Haddii aad galay dugsiga, la hadal ku saabsan waxa aad soo baratay. Ha la hadal, waayo, aad u dheer, iyo dhameysan la wax aad dareemayso ama imminka. Tusaale ahaan, baad u odhan kartaa in aad ku faraxsanahay in la codsanaya shaqo this.
Maxaad ka taqaanaa ururka this (ama ganacsi)?
Marka lagu weydiiyo in aad su'aashan, hadlaan waxyaalaha wanaagsan aad u ogaato. Waxaad dhahdaa waxa aad jeceshahay oo ku saabsan shirkadda. Isu diyaari su'aashan iyagoo eegaya website-shaqeeyaha ee. Read ku saabsan gool ee shirkadda iyo waxa mashaariic ay ka shaqaynayaan on. Haddii shirkadda uusan haysan website a, isticmaalka Glassdoor ama Yelp. Waxa laga yaabaa inay kuu sheegi waxa ay dadka kale u malaynayso oo ku saabsan shirkadda.
Waa maxay sababta aan kuu shaqaalayneynno?
Ka hor waraysigaaga, akhri description shaqada. Dooro 3 in 5 xirfadaha aad leedahay in ay yihiin waxa ugu muhiimsan ee shaqada. La hadal ah oo ku saabsan xirfadaha kuwa. Waxaad dhahdaa sida ay u caawin lahaa ururka. Tusaale ahaan, qof codsanaya in ay kaaliye macalin ayaa dhihi kara, "Waxaan wax ka badan 8 sano la-shaqeynta caruurta ee xanaanaydyo iyo xarumaha bulshada. waayo-aragnimo aan u abuuro manhaj iyo dadka ka shaqeeya ka dhaqamo badan. Waxaan ogaaday in qaar badan oo ka mid ah qoysaska ugu yimid dugsigaaga hadli Isbaanish. Isbaanish ahayn luqaddaada koowaad aan, sidaa darteed waxaan ka caawin kara turjumo. "
Waa maxay daciifnimo?
Ha odhan aadan haysan tabar a. Dooro wax la hagaajin karin. Ka hadal wixii aad ku samaysay in ay ka shaqeeyaan on your daciifnimo. Sharax sida uu helay wanaagsan - haddii waxa uu leeyahay. Tusaale ka mid ah tabar caadi ah waa hadlaya dadweynaha. Waxaad dhihi kartaa waad qaaday fasallada hadlaya dadweynaha iyo ku dhaqma wax badan oo aad shaqo ee la soo dhaafay. End by leh in aad hadda dareemaan kalsooni badan marka uu ka hadlayo ee dadweynaha, ama in aad weli ka shaqeeya waxa on.
Xaggee baad naftaada ku aragto 5 sano?
Waxaad tidhaahdaan, waxa ugu muhiimsan in aad waa in la helo shaqada oo si wanaagsan u sameeyo. Haddii aad ogtahay waxa shaqo ku xusan booskaaga waa, xusuusto. Haddii aadan samayn, ayaa sheegaya in aad jeclaan lahayd inay ku jiraan shaqo heer sare halkaas oo aad u caawin karto shirkadda xitaa more. Sheeg waxa xirfadaha aad doonayso inaad isticmaasho.
Markii aad ka jawaabayso su'aalaha oo dhan wareysi shaqo, isku day in aad ka jawaabto in 2 daqiiqo ama wax ka yar. Haddii waraysanaya doonayo inuu maqlo macluumaad dheeraad ah, waxay ku waydiin doonaa su'aalo daba-.
su'aalo wareysi shaqo Behavioral
Mararka qaarkood, shaqeeyaha waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo inaad u sheegto sheeko ku saabsan sida aad u dhaqantay in xaalad adag. Waxay rabaan in ay bartaan oo ku saabsan nooca qofka aad tahay iyo sida aad wax ka qaban.
Markii aad ka jawaabayso su'aalaha dabeecadda, isticmaalaan Result Dhibaatada Action (BY) format.
1. dhibaatada: Bilow jawaabtaada by tilmaamay xaaladda iyo dhibaatada faahfaahsan. Sharax xaaladda shaqada iyo dadka. Tusaale ahaan, laga yaabaa inaad tiraahdo "Markii aan tababare ugu Cocina Michoacana ahaa, Waxaan u suurtagashay shan mudalabyada iyo waitresses. Mid ka mid ah mudalabyada lahaa inta badan ma muujiyaan ilaa ay ka shaqeeyaan waqti. "
2. Action: Sheeg waxaad soo qabatay si uu u xaliyo dhibaatada. Waxaa laga yaabaa inaad ku odhan, "Waxaan la hadlay kabalyeeri gaar ah oo ku saabsan soo socda in ay ka shaqeeyaan waqti. Wuxuu ii sheegay in hooyadii ay ahayd mid aad u xanuunsan. Wuxuu ma uu karin inuu ka helo daryeelaha ah oo laga yaabaa inay bilaabaan aroor hore. Mararka qaarkood, uu lahaa inaad guriga joogto haddii ay si fiican uma dareemayo. "
3. Natiijo: La hadal ah oo ku saabsan natiijada guul iyo waxa aad baratay. dhammaaneysa A fiicnaan lahayd, "Waxaan go'aansaday in la beddelo gelinba kabalyeeri ah ee dambe ee maalintii. Waxaan weydiiyey haddii ay caadi ahayd in la sheego qaar ka mid ah co-workers si ay caawin kara. Waxa uu sheegay in ay haa tahay. Waxay ku heshiiyeen in ay daboosho uu shaqada haddii ay jiraan xaalad degdeg ah. "
Ha u sheegin sheeko meesha dhibaatada la xallin.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah su'aalaha kale ee caadiga ah dabeecadda:
Noo sheeg oo ku saabsan waqti aad u diiddan tahay in aad Tababaraha kooxda.
Sharaxaad ka bixi waqti ma aadan helin oo ay la socdaan coworker a.
Waa maxay guul fiicnaa?
Noo sheeg oo ku saabsan waqti aad qalad sameeyay shaqada.
Sharaxaad ka bixi waqti marka aad ka hooseeyeen cadaadis badan shaqada.
Your waraysanaya looma ogola in aad weydiiso su'aalo shakhsi. Tan waxaa ku jira xaaladda guurka, tirada carruurta aad leedahay, iyo da'daada. Haddii qof aad u waydiisaa su'aasha si shakhsi aadan rabin in aan ka jawaabo, baad u odhan kartaa edeb leh odhan, "Ma jecli inaan ka jawaabo su'aasha in."
su'aalo wareysi shaqo ka dhigi qof kasta habdhiska. Waxa ugu fiican ee waa in la xasuusto iyo gudashada jawaabo! Haddaad awoodid, dhaqmaan saaxiib ama xubin qoyska.
Read talooyin resume
Samee xirfadeed liiska tixraacyada